MIPS Technologies Inobatanidza RISC-V uye Inoshandura kune iyo Yakavhurika Sosi ISA Standard | Linux Vakapindwa muropa
MIPS Technologies Inobatana neRISC-V uye maSwichi ekuvhura Sosi ISA Standard
RISC-V yatanga kuwana mukurumbira mukuru uye izvi zvakatomisikidza zvimwe zvekutanga sezvo paine shanduko mune processor nharaunda. Iko kuvandudzwa kweMIP processor processor yekumisa ikozvino yamiswa uye MIPI kambani ichatanga kugadzira RISC-V-yakavakirwa machipisi. Iyo nyowani yeMIP kambani, yakaumbwa neWave Computing Inc. uye ma subsidiary ayo, anosanganisira MIPS Technologies, processor technology kambani yakanangana nekutengesa RISC-based processor mapurani uye IP cores, inobatana neiyo RISC munda. -V, Kusiya zvivakwa zvayo zvisina kuzivikanwa.
Silicon maker MIPS ndeimwe yekare kare RISC chip vagadziri, yakashandiswa mune akasiyana masystem kubvira kunonoka makore makumi masere. Inozivikanwa neyakachena uye inoshanda dhizaini, iyo inobvumidza kuchinjika kune akasiyana mafomu, iyi kambani yanga iri imwe yeanonyanya kushambadza pamusika panguva yayo yezuva, zvekuti Windows operating system yaive ne MIPI chiteshi mumavambo ekuma80. Zvisinei, kambani iyi yaifanirwa kukwikwidzana nekukura kwemugove, musimba uye panjodzi yekubhuroka mumakore apfuura.
MIPI yakapfuura nepamaoko mazhinji mumakore apfuura.
Muna 2018, MIPI yaive yeImagination Technologies, asi munguva pfupi kambani yaive nematambudziko ayo emari uye yaifanira kutengesa MIPE midziyo kuWave Computing. Wave yanga ichigadzira yayo yakasarudzika AI yekumhanyisa Hardware pane yakajairwa-chinangwa MIPS processor uye ndokutenga iyo yese MIPO sangano. Shanduko iyi yaitaridzika kunge isina kujairika uye inosemesa, zvichipiwa kuti vanga vatowana rezinesi repfuma yezvakakosha. Nekufamba kwenguva, zvakatanga kuoneka kuti chikamu cheMIPI chebhizinesi ndicho chikamu chakatsiga chebhizinesi.
Wave Computing yakazopedzisira yazivisa kuvhurwa kweMIPO Opena chirongwa mukutanga kwa2019 Naizvozvo, paive netariro yekuti kufarira kukwikwidza neRISC-V neArm zvakare kwaizowedzera. Izvo zvakaitwa mukati mekota yekutanga ye2019.
"Avo vanotora chikamu muchirongwa cheMIPS Open vanozove nekuwana kuzere kwazvino ma32-bit uye makumi matanhatu neshanu shanduro dzekuvakwa kweMIP, mahara (pasina marezinesi kana mareti)," Wave Informática yakazivisa muna 64. ipa hupenyu hutsva kune dhizaini yakasiyiwa yevakafa, asi ichiri kushandiswa mune zvakawanda zvigadzirwa zvevatengi senge PlayStation uye Nintendo 2018 mitambo yemitambo. "Iyo MIPS standard inomiririra makumi emakore ehunyanzvi ane anopfuura anopfuura 64 mabhiriyoni emachipisi mumidziyo yekutengesa," anoyeuka Wave Computing.
Wave akazoparara gore rakapera uye akaonekwa svondo rapfuura pasi pezita nyowani, MIPS. Nzira iyo Wave akazvarwa patsva, achibuda mukubhuroka, zvinoshamisa, asi kwete zvachose zvisina musoro. Saizvozvo, Mune chirevo chayo chepamutemo, iyo MIPS itsva yakave nhengo yeRISC-V International, iyo isingabatsiri purofiti iyo inofambisa iyo yakazara yakavhurika ISA, zvikuru ichitsiva zvivakwa zvazvino zviyero neyakajairwa.
Iri izere bhizimusi modhi shanduko, kwete chete processor yekugadzira. Iwo maMIP ekare akasarudzika mukupa marezenisi epfuma yezvivakwa, senge ARM, Ceva kana Rambus. Makambani senge yekare Wave Computing vaive vatengi vayo uye ma processor seArM neRISC-V vaive vakwikwidzi vayo. Iye zvino equation yadzorerwa.
Iyo kambani yaisafanirwa kuenda kure kuti inowana mavakirwo matsva. RISC-V ndiyo brainchild yaDave Patterson nechikwata chake kuUC Berkeley, uye akabatana kunyora Prosesa Dhizaini Referensi Manual naJohn Hennessy kuStanford. Hennessy's microprocessor isina Interconnected Pipe Stage (MIPS) yakatangira iyo RISC-V makore angangoita makumi maviri, asi iwo maviri akafanana nenzira inoshamisa mune yavo yepazasi pfungwa uye uzivi.
Iyo MIPS nyowani inotarisirwa kuenderera nekukudza zviripo rezinesi zvibvumirano zvakasainwa kusati kwagadziriswa, zvinoreva kuti vane marezinesi vanogona vachiri kuvaka zviri pamutemo machipisi zvichibva pane yekutanga MIP yekuvaka uye vachiri kufanira kubhadhara mvumo kune iyo kambani.
Panyaya yekubatsira marezinesi, iko kutaridzika kunotaridzika kusviba, kunyangwe zvisina kujeka kana iyo MIPS itsva ine vashandi kana kuda kupa kwakanyanya rutsigiro kune vagadziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » MIPS Technologies Inobatana neRISC-V uye maSwichi ekuvhura Sosi ISA Standard
Kuongorora kweBitcoin. Zvinotaurwa neCryptocurrency Vatsoropodzi